သနားဖို့ ကောင်ေးလာက်အောင် ဘ၀ခါးနေတဲ့ ချစ်သက်နဲ့ မြင့်မြတ်တို့ရဲ့ အခွီ Tik Tok Video ဖိုင်လေး - Cele GabarCele Gabar
သနားဖို့ ကောင်ေးလာက်အောင် ဘ၀ခါးနေတဲ့ ချစ်သက်နဲ့ မြင့်မြတ်တို့ရဲ့ အခွီ Tik Tok Video ဖိုင်လေး
Published: April 11, 20191:09 pm
ပရိသတ်တွေ ချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချစ်သက် (သက်မွန်မြင့်) နဲ့ မြင့်မြတ်တို့ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ သရုပ်ဆောင်အရည်အချင်း အနုပညာပိုင်းမှာ ပြောစရာ မလိုအောင် တော်တဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမ နှစ်ယောက် ချစ်သက် (သက်မွန်မြင့်) နဲ့ မြင့်မြတ်တို့က တော့ “ကဝေခြောက်တဲ့တစ္ဆေ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အတူတူ ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ဇာတ်အိမ်တစ်ဝက်လောက် ပီးစီးနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
“ကဝေခြောက်တဲ့တစ္ဆေ” အမည်ရတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကြီးမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင် သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ချစ်သက်နဲ့ မြင့်မြတ်တို့ နှစ်ယောက်လုံးဟာ ရှူတင်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ပါးစပ်မစေ့ရအောင် အခွီလေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးရေးအပြီမှာ ထမင်းအတူတူ စားရင်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့က ၀တ်စုံတွေနဲ့ အတူ tik tok Video လေးအတူတူ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော့ အရမ်းကို ရယ်မောစေခဲ့ရပါတယ်။
ချစ်သက်နဲ့ မြင့်မြတ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးအတူ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ tik tok Video လေးဖြစ်ပြီး တဲအိမ်အဟောင်းလေးဘေးမှာ မျက်နာငယ်လေးနဲ့ အတူတူ ထမင်းစားရင်း ဘယ်လိုတောင် ရယ်စရာကောင်းတဲ့ tik tok Video တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကလည်း ချိုင်းထောက်လေးတစ်ခုနဲ့ ချစ်သက်ကလည်း မျက်နာငယ်လေးနဲ့ နှစ်ယောက်သားဘယ်လိုတောင် ဘ၀ခါးနေလဲ ဆိုတာ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် Video လေးနဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရပါတယ်နော် …. ။
Posted by Thet Mon Myint on Wednesday, April 10, 2019
ပရိသတျတှေ ခဈြရတဲ့ အနုပညာရှငျနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ခဈြသကျ (သကျမှနျမွငျ့) နဲ့ မွငျ့မွတျတို့ နှဈယောကျလုံးကတော့ သရုပျဆောငျအရညျအခငျြး အနုပညာပိုငျးမှာ ပွောစရာ မလိုအောငျ တျောတဲ့ အကယျဒမီဆုရှငျသရုပျဆောငျတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
ခဈြဖို့ ကောငျးတဲ့ အနုပညာရှငျမောငျနှမ နှဈယောကျ ခဈြသကျ (သကျမှနျမွငျ့) နဲ့ မွငျ့မွတျတို့က တော့ “ကဝခွေောကျတဲ့တစ်ဆေ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို အတူတူ ရိုကျကူးနပွေီဖွဈပွီး ဇာတျလမျးရဲ့ဇာတျအိမျတဈဝကျလောကျ ပီးစီးနပွေီလို့ ဆိုရမှာပါ။
“ကဝခွေောကျတဲ့တစ်ဆေ” အမညျရတဲ့ ဒီရုပျရှငျကွီးမှာ အဓိက ဇာတျကောငျ သရုပျဆောငျတှအေဖွဈ ပါဝငျ သရုပျဆောငျနကွေတဲ့ ခဈြသကျနဲ့ မွငျ့မွတျတို့ နှဈယောကျလုံးဟာ ရှူတငျမှာ ပြျောပြျောပါးပါးနဲ့ ပါးစပျမစရေ့အောငျ အခှီလေးတှေ ပွုလုပျခဲ့ ကွပွနျဖွဈပါတယျ။ ရိုကျကူးရေးအပွီမှာ ထမငျးအတူတူ စားရငျး ဇာတျဝငျခနျးတခြို့က ဝတျစုံတှနေဲ့ အတူ tik tok Video လေးအတူတူ ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကွေားမှာ တော့ အရမျးကို ရယျမောစခေဲ့ရပါတယျ။
ခဈြသကျနဲ့ မွငျ့မွတျတို့နှဈယောကျရဲ့ ပထမဆုံးအတူ ရိုကျကူးခဲ့ရတဲ့ tik tok Video လေးဖွဈပွီး တဲအိမျအဟောငျးလေးဘေးမှာ မကျြနာငယျလေးနဲ့ အတူတူ ထမငျးစားရငျး ဘယျလိုတောငျ ရယျစရာကောငျးတဲ့ tik tok Video တဈခုကို ဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မွငျ့မွတျကလညျး ခြိုငျးထောကျလေးတဈခုနဲ့ ခဈြသကျကလညျး မကျြနာငယျလေးနဲ့ နှဈယောကျသားဘယျလိုတောငျ ဘဝခါးနလေဲ ဆိုတာ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးအတှကျ Video လေးနဲ့ တကှ ဖျောပွပေးလိုကျပါရစေ…. ။
Previous Previous post: “ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအိမ်မှာ ဖျော်ဖြေဧည့်ခံဖို့ ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ ခင်ပိုးပန်းချီ “
Next Next post: ငါ့ရည်းစားကပိုမိုက်တယ်သီချင်းလေးနဲ့ စင်ပေါ်ဖျော်ဖြေနေချိန်မှာ စင်အောက်ကနေ အပြတ်ပဲပေးကာ အားပေးခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း ချစ်သူမိန်းကလေး ရဲ့ Video လေး
Line Walker (2) ရိုက်ကွင်းရောက် ထားထက်ထက်ပြောပြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အားနည်းချက်
Published: February 22, 20192:44 pm
“တောင်ကြီးမြို့မဈေးရှေ့ ဗုံးလန့်မှု မှာ ကံကောင်းလို့ ဒုက္ခ မရောက်ခဲ့တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်”
Published: November 16, 20184:51 pm
ခုနှစ်အလိုက် လျှောက်လမ်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ အကယ်ဒမီလမ်း
Published: January 31, 201911:03 am
Published: February 22, 20178:12 am Updated: March 18, 20199:38 am
အပေါစား မျက်နှာဖုံးတွေကြောင့် ဘီလူးရုပ်ပေါ်တတ်တယ် လို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
Published: December 13, 20187:22 pm
Published: February 28, 201911:32 am